Muxuu madaxweyne Farmaajo ka hortaagnaa heysashada dhalashada Mareykanka? – Somali Top News
Muqdiso: Booliska Oo Sheegay inay Fashiliyeen Qarax La Galiyay Wado Muhiim ah
Dowladda Soomaaliya oo shaacisay xiliga ay bilaabaneyso duulimaadyada gudaha dalka
Soomaali ku dhintay dagaal ka dhacay Minneapolis
FESOJ Concludes COVID-19 Somali Media Coverage Monitoring
Dowladda Federalka oo shatiga duulimaad kala laabtay shirkado diyaaradeed oo laga leeyahay Kenya
Somali Top News
Reliable news from Somalia
Warar Af Soomaali
Warar Cod Ah
Muxuu madaxweyne Farmaajo ka hortaagnaa heysashada dhalashada Mareykanka?
August 3, 2019 Somali Top News	0 Comments
Had dheer iyo had dhow, ma aheyn mid la hilaadiyo, siyaasi soomaali ah, inuu ka tanaasulo dhalashada uu ka heysto dhul kaloo shisheeye.
Albaabka uu furay madaxweyne Farmaajo, waxaa si dareen leh usoo dhoweeyay dadka Soomaaliyeed ee dowladnimada jacel!, iyagoo qaati iyo quus ka taagnaa siyaasiyiinta dhalashooyinka ka heysta dalalka ajnabiga ah, kuwaasoo xil iyo xoolo usoo doonta dalka, kaba darane, marka laga xabuubiyo, amaba xaalka ku xumaado, si aan xishood laheyd dib isaga xaadiriya halkii ay marka hore kasoo xirxirteen.
Go’aanka madaxweynaha, dantii la doonaba haka danbeysee, qasadkii larabana haku qarsoonaade,e, waa mid DAN WEYN u ah dadka soomaaliyeed ee dowladnimada daneynaya. Waxeyna bilow fiican u tahay in la galo dadaalkii dastuurka loogu dari lahaa in muwaadin labo dhalasho heystaa aanu dalka xil ka qaban karin ilaa uu ka tanaasulo mida shisheeye, iyadoo taasi keeneyso in la helo dad daacad u ah dadkooda iyo dalkooda.
Hadaba Passaboorka ajnabiga muxuu caqabad leeyahay?!
Horaa loo yiri “ninkii labo dal yeeshaa midkood buu dayacaa” Inta badan siyaasiyiinta heysta dhalashooyinka reer galbeedka marka ay xil qabtaan,waa kuwo aan xor u aheyn gaaridda go’aamo qaar oo dalkooda quseeya!; sidoo kale waxaysan awoodin inay dabaqaan qodoba dadtuurka ka mid ah, iyagoo ka baqaya inay ka hor yimaadan dastuurka dalalka ay dhalashada ka heystaan, taasoo keeni karta in jinsiyadda laga xayuubiyo ama lagu xukmiyo.
Arrimahaas waxa ay sababeen in la fulin waayo howlo badan oo dastuuri ah, sido kale laga hadli waayo kuwo badan oo ay aheyd in laga war celiyo. Kuna garo taas, siyaasiyiinta marna wax dhaliila marna dhawaaqoodu aan la maqal.
Ma aqaan sababta, laakin waxaa lagu mala weynyahay, Haysashada dhalashada mareykanka, in madaxweyne Farmaajo ka hortaagneyd fulinta waxa ugu weyn uguna muhiimsan ee ay umadda soomaaliyeed baahi badan u qabto, taasoo ah caddaalada.
Tan iyo intii madaxweyne Farmajo la doortay, waxaa gebi ahaanba meesha ka baxay xukunnadii qisaasta ahaa ee lagu fulin jiray gacan ku dhiigleyaasha la xukumay. Waxa ay taasi sahashay in dilalka askarta dowladda geystaan uu noqdo tusbax furmay, sidoo kale tiro maleh ragga Alshabab ka tirsan oo lagu xukumay dil toogasho kuwaas oo aan weli fulintooda laga fakirin!.
Sababta loo fulinwaayay xukunnadaas qisaasta ah ayaa ahaa, in madaxweynuhu uusan saxiixin falka fulintiisa.
Madaxweyne Farmaajo wuxuu heystay dhalashada mareykanka . wuxuu matalayay muwaadin mareykan ah oo ku dhaaraty dastuurka dalkaas. Sida cad, waxay taasi ka reebeysay fulinta falalka kasoo horjeeda dastuurka Mareynkanka. Dastuurka Mareykanka wuxuu si cad u reebayaa in qofkii dil bareer geysta aan la dilin, bedelkii xabsi lagu xukumo. Haddii uu ku xadgudbana waxay ka dhigneyd inuu jabiyay sharciga dalkaas taasoo wax yeeleyn kartay dhalashadiisa.
Gef waa dhacaa waase laga garwaaqsadaa, waxaa la rajeyneynaa mar haddii uu madaxweyne Farmaajo celiyay jinsiyaddii ka hortaagneyd fulinta caddaalada, in markan uusan hor istaagi doonin in la qisaaso gacan ku dhiigleyaasha.
Sido kale, Waxaa la sugayaa, talaabadan uu qaaday madaxweynaha, inaysan noqon mid isaga keli aan ku ekaan, asii ay ku dayan doonaan dhamaan kooxdiisa Nabad iyo Nolol, haba ugu horreeyee ra’iisul wasaare KHEYRE. Giraantu ha wareegto!
W/Q Abdinasir Safaana
← Marxum Eng Yariisow oo maanta laga soo dejenyao garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho
Seychelles oo Somaliland ku eedeysay iney jebisay sharciga la dagaalanka Burcad Badeeda →
Danjire Caalim “ Safarka Ra’isul Wasaare Kheyre Ee Itoobiya Maxaa Ka Fahansantahay?”
May 27, 2018 Somali Top News 0
Dastuurkii dalka ee Xoosh loo daayay, maxey tahay danta laga leeyahay?
November 25, 2018 November 25, 2018 Somali Top News 0
Waa maxay ujeedka mucaaradka dowladda Soomaaliya ?
December 23, 2018 Somali Top News 0
Jahaweerarka siyaasadeed ee hogaanka Dowladda Federalka iyo xalka ugu haboon
April 22, 2020 May 17, 2020 Somali Top News 0
Baarlamanka Soomaaliya oo galay fasax aan mudeysneen,shaqadii doorashada oo aan socon iyo tusaallaha muddo kororsi ee uu soo bandhigay Madaxweyne
Taariikh Nololeedka Ra’isul Wasaarihii Soomaaliya, Nuur Cadde
April 12, 2020 April 12, 2020 Somali Top News 0
Khiyaannada Farmaajo ee Doorashada 2021!!!
February 22, 2020 February 22, 2020 Somali Top News 0
Fahamka Federaalka iyo Qabiilaynta xuduudaha gobaladu xal ma noo yihiin?
October 26, 2019 Somali Top News 0
Warshiikh Waa Magaalo Ceynkee Ah ? [Faallo iyo Sawirro Taariikhi ah]
September 21, 2019 Somali Top News 0
Somali Top News is
Copyright © 2020 Somali Top News. All rights reserved.